Notsapainay ny Apple Watch, ny rindrambaiko finday tsara indrindra amin'izao fotoana izao | Vaovao IPhone
Vao tonga tao amin'ny magazay any Espana sy Mexico any amin'ny firenena hafa ny Apple Watch taorian'ny roa volana nanombohany tany Etazonia sy firenena hafa. Apple dia nanao azy indray ary na dia eo aza ny zava-misy fa maro no nanome toky fa tara io tsena vaovao io, ny Apple Watch dia nanjary fitaovana maoderina, ilay famantaranandro izay tian'ny olona rehetra eny an-tànany. Ao amin'ny Actualidad iPad dia efa ananantsika efa ela izany ary mandinika ny mampiavaka azy amin'ny sary sy video izahay mba hahafantaranao na dia ny antsipiriany kely indrindra amin'ny smartwatch tsara indrindra azo vidiana, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao.
1 Volavola amin'ny fomba tena Apple
2 Fankaherezana fehin-kibo fanatanjahan-tena
4 Fampandrenesana azo namboarina
5 Fampiharana tena samihafa nefa tsy azo ovaina
6 Sarimihetsika tena saro-pady, tsy azo ovaina any ivelany
7 Andro fizakan-tena tsy misy olana
8 Ny smartwatch tsara indrindra na dia azo hatsaraina aza
9 Miandry taranaka faharoa?
Volavola amin'ny fomba tena Apple
Ny maodely hodinihintsika dia ny Apple Watch vy 42mm miaraka amina fehin-kibo mainty. Ny endriny dia tsy diso fanantenana, ary toy ny vokatra Apple, ny saina amin'ny antsipiriany dia avo indrindra. Mifanentana tanteraka ny zava-drehetra, vokatra mafy orina izy io ary miavaka ny famaranana ny vy vita amin'ny vy. Ny satroboninahitra nomerika dia tsy mety amin'ny toerana rehetra ary malefaka be ny fihetsiny, tsy misy tsindry na fihetsika tsy mandeha amin'ny toerana.
Ny tsy fahitana ny famantaranandro alohan'ny fividianana azy dia miteraka fisalasalana betsaka momba ny habe mety indrindra. Na izany aza mieritreritra aho ny maodely 42mm, ny lehibe indrindra, no mety indrindra amin'ny be indrindra. Ny gorodona kely misy tanana fotsiny na ireo izay tia famantaranandro kely no tokony hifidy ny maodely 38mm. Rehefa esorinao ao anaty boaty ilay izy, ny zavatra voalohany manaitra ny sainy dia tsy lehibe araka ny noeritreretinao ny habeny, ary kely kokoa aza rehefa apetrakao amin'ny tananao.
Ny hateviny dia tsy mihoampampana koa. Na eo aza ny fijery ny sary hitantsika tamin'ny internet na ny hevitra sasany azontsika vakiana aza, ny fahitako azy dia mba ho smartwatch dia manify. Raha ny marina dia mahia kokoa noho ny famantaranandro izay ampiasako matetika, araka ny hitanao amin'ny sary, na dia marina aza fa modely misy tranga matevina indrindra izy io. Mahafinaritra ny mitafy ny Apple Watch, ary na dia mavesatra noho ny an'ny aliminioma aza ny maody vy, dia tsy famantaranandro izay tsikaritro fa mitafy anao mihintsy.
Fankaherezana fehin-kibo fanatanjahan-tena
Araka ny efa fantatry ny ankamaroanao, ny Apple Watch miaraka amina fehin-tànana fanatanjahan-tena Ahitana kofehy roa ao anaty boaty mba hifanaraka tsara amin'ny tanana. Tsy manana tanana lehibe aho, ary ny fehin-tànana midadasika izay tonga amin'ny alàlan'ny toerana misy anao dia mifanaraka tsara amiko ao amin'ny lavaka penultima. Raikitra tsara ny famataranandro, tsy misy banga, ary zara raha mihetsika, nefa tsy mahazo aina mihitsy. Ny fehin-kibo dia misy fikitihana malefaka be ary tsy misy olana amin'ireo fikafika kely ateraky ny fehy sasany, indrindra ireo izay manana volo.
Mazava ho azy fa rehefa te hanao fanatanjahan-tena isika dia tsara kokoa ny manitsy tsara ny tadiny mba hamboarina kokoa. Napetrako tao amin'ny lavaka farany, mbola tsy manelingelina izany ary miasa tsara kokoa ny fika am-po amin'ity fomba ity. Tsy afaka nanandrana fehin-kibo hafa aho mba hahitako ny fahatsapana naterak'izy ireo rehefa mitafy azy io henjana, saingy mazava ho azy fa tena mahazo aina ilay mpanao fanatanjahan-tena.
Ny fampifandraisana ny Apple Watch amin'ny iPhone dia tena tsotra. Misaotra ny fampiharana Apple Watch izay misy ny iOS avy amin'ny kinova 8.3 amin'ny dingana vitsivitsy dia ho vonona ny famantaranandronao hiasa tanteraka. Ny zavatra mora indrindra dia ny maka ny famantaranandronao amin'ny fakantsary, fa azo ampifandraisina amin'ny tanana ihany koa nefa tsy misy olana. Haingana ny fizotrany fananganana voalohany, na dia misafidy ny hampiditra ireo fampiharana mifanentana amin'ny famantaranandronao aza ianao dia ho elaela vao hafindra amin'ny famantarananao. Ny zavatra tsara indrindra dia na dia mitaky fifantohana kely kokoa sy fotoana bebe kokoa aza ianao dia misafidy izay tena tianao hampiasaina, ary avy eo hanana fotoana hanampiana na hanesorana ireo rindranasa.
Ny fikirana famantaranandro dia amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny fampiharana Apple Watch amin'ny iPhoneo, miaraka amin'ireo safidy vitsy dia vitsy azo jerena ao amin'ny Apple Watch mihitsy. Azonao atao ny manamboatra ny orientation amin'ny famantaranandro arakaraka ny fehin-tànanao anaovanao azy, ny famirapiratan'ny efijery ary ny haben'ny lahatsoratra, ny habetsaky ny fampandrenesana ary ny hamafin'ny hovitrovitra, ary ny kaody hidy. Ny safidy fanamboarana dia kely fotsiny, zavatra izay tsy isalasalana fa tsy maintsy hivelaran'ny Apple amin'ny kinova ho avy.
Fampandrenesana azo namboarina
Ny Apple Watch dia mihoatra lavitra noho ny famantaranandro izay nandraisanao fampandrenesana avy amin'ny iPhone anao, saingy tsy isalasalana fa ny fampandrenesana dia ampahany manan-danja amin'ny vitan'ny famantaranandro, ary mety hahasosotra tokoa izy ireo. Ny fanamafisana voalohany dia ahitana fa ny rindranasa rehetra izay mandefa fampandrenesana amin'ny iPhone dia mandefa azy ireo koa amin'ny famantaranandro, ary izany dia zavatra heveriko fa vitsy no mahazaka. Miaraka amin'ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra, tamba-jotra sosialy, mailaka ary fampandrenesana momba ny zava-bitanao isan'andro amin'ny resaka asa ara-batana, ny fiambenana dia tsy mitsahatra mihetsiketsika amin'ny fotoana rehetra, noho izany Zava-dehibe ny fahalalana ny fomba sivana izay tianao hahatratra ny tananao ary inona no tsy.
Soa ihany fa mamela anao hamolavola an'io i Apple mba misy fampandrenesana mahatratra ny iPhone fa tsy ny famataran'ora. Raha vantany vao apetrakao araka ny itiavanao azy, dia mandresy be ny fampiasana ny Apple Watch, ary tena tsy mampaninona izany, na ho anao na ho an'ny hafa. Ny fampandrenesana dia mamoaka feo (azonao vonoina) ary hovitrovitra feno fahendrena (azonao ampitomboina raha tianao), saingy tsy manidy ny efijery izy ireo. Raha mihodina ny tananao ianao mba hahitanao ilay fampandrenesana dia haseho eo amin'ny efijery, izay ankasitrahana ka raha any amin'ny fivoriana ianao na eo amin'ny sinema dia tsy mandeha foana ny famantarananao.
Aza ilaina ny manelingelina maody eto noho ny hatramin'izay, ary raha ampidirinao amin'ny fitaovana iray dia hihetsika amin'ny iray hafa. Manana izany ianao amin'ny iray amin'ireo «Glances» hahafahana miditra haingana avy amin'ny Apple Watch na avy amin'ny foibe fanaraha-maso an'ny iPhone. Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny fampandrenesana tonga amin'ny famantarananao dia tsy hampandrenesina amin'ny iPhone, ka hisorohana ireo fampandrenesana dika mitovy. Ny safidy hanesorana ireo fampandrenesana rehetra avy amin'ny Apple Watch anao amin'ny fampiasana Force Touch dia tena ilaina ary tsy hita amin'ny iPhone.
Fampiharana tena samihafa nefa tsy azo ovaina
Ny katalaogin'ireo fampiharana mifanaraka amin'ny Apple Watch dia tena malalaka, miaraka amin'ny 3500 mahery ao anatin'ny roa volana eny an-tsena, fa tsy midika izany fa tena ilaina daholo na voalamina tsara daholo. Vitsy dia vitsy no tena manararaotra ny fahafahan'ny famantaranandro ary mandeha tsara. Ny sasany dia miadana be manomboka, ny famantaranandro aza mamono ny efijery nefa tsy nosokafana. Tsy fantatro hoe hatraiza ny mety ho lesin'ny watchOS na ny mpamorona ny fampiharana, azo inoana fa fitambaran'izy roa ireo, saingy zavatra toa toa voavaha vetivety izany miaraka amin'ny mety fametrahana apetraka mivantana amin'ny famantaranandro. , zavatra iray izay hisy fiantraikany mivantana amin'ny zava-bitany sy ny hafainganan'izy ireo.
Tena mandeha tsara ny rindranasa zanatany, ary ohatra tsara amin'ny zavatra tena vitan'ny famantaranandro izy ireo. Valio ny antso, manorata hafatra amin'ny alàlan'ny baiko, tantano ny mailakao, araho ny hetsika ara-batana ataonao, tantano ny hetsika kalandrie nataonao ... tsotra sy haingana dia haingana avy amin'ny famantaranandro io rehetra io, ary dia ho fotoana kely vao hahatratra izany ny mpamorona fampiharana izay nataon'i Apple dia ny fampiharana azy.
Sarimihetsika tena saro-pady, tsy azo ovaina any ivelany
Ny efijery dia manana famaritana tena tsara. Na ny fiambenana na ny sary dia hita miaraka amina kalitao tsara, ary izany dia tsikaritra indrindra raha avy amin'ny fampiasana Pebble ianao. Tsara ny loko, ary avo ny fahatsapana ny tsindry. Na dia amin'ny voalohany aza dia olana io, satria manao Force Touch foana ianao, midika izany mila manery im-betsaka ianao hahazoana izay tadiavinao. Tao anatin'ny iray andro mahery dia efa zatra izany ianao ary tsapanao fa ny manindry bokotra dia mila mikasika azy fotsiny ianao, fa tsy manindry azy, ary rehefa manindry ianao dia ataovy Force Touch ary sokafy ny menio mifanaraka aminy.
Ny teboka fanatsarana dia ny fahitana ivelany. Amin'ny toe-javatra mahazatra dia tsara izany, fa rehefa mahazo tara-pahazavana mivantana dia somary sarotra ny raharaha. Na dia hitanao aza izay aseho eo amin'ny efijery, ny fahitana dia tsy izay tadiavinay rehetra. Zavatra toa ratsy kokoa amin'ity modely ity amin'ny vera safira noho ilay maodely fanatanjahantena miaraka amin'i Gorilla Glass, saingy tsy afaka nanandrana ity farany aho. Mbola manizingizina ihany aho fa hita ny atiny ary misy ny olana amin'ny tara-pahazavana mivantana fotsiny.
Eny, tsy hita fa manamboatra ho azy ny famirapiratana. Ny famantaranandro dia manana sensor jiro manodidina, noho izany dia tsy takatra fa tsy manampy an'io asa io i Apple. Amin'ny farany izay ataon'ny ankamaroantsika dia manitsy ny famirapiratana hatramin'ny farany ambony, fa misy fiatraikany amin'ny fihinanana bateria tsy azo ihodivirana.
Andro fizakan-tena tsy misy olana
Fantatsika fa ny bateria dia tsy ho lasa teboka matanjaka amin'ny Apple Watch, fa izay nampanantenain'i Apple tamin'ny famelabelarany azy dia tanteraka tsy misy olana. Amin'ny fampiasana antonony avo dia mora ny manatratra ny faran'ny andro miaraka amin'ny bateria 40% mbola misy, ary amin'ny fampiasana mahery vaika toy ny fanaraha-maso ny hetsika ara-batana mandritra ny adiny iray afaka mihazona milamina mandra-paharivan'ny alina ianao. Mbola tsy nahavita namoaka ny bateriko aho alohan'ny hatory, ary nisy andro izay nampiasako azy tsara indrindra.
Mampalahelo fa midika izany fa isaky ny alina ianao dia tsy maintsy handoa azy io, satria tsy maninona na tonga ianao na 40% na 10% dia tsy haharitra andro hafa izany. Na dia tena mahazo aina aza ny charger (afa-tsy ny halavan'ny tariby), malahelo fanampiana ianao hametrahana azy amin'ny alina, ary mampalahelo fa tsy nieritreritra momba azy mihoatra ny an'ny maodely fanontana (volamena) i Apple.
Ny smartwatch tsara indrindra na dia azo hatsaraina aza
Tsy mampidi-doza ny milaza fa ny Apple Watch no smartwatch tsara indrindra azonao vidina anio, na dia tsy sarotra aza ny manatratra azy amin'ny safidy azonao izao. Misy ny smartwatches miaraka amin'ny fizakan-tena bebe kokoa, saingy ny asan'izy ireo dia tsy misy akaikin'ny tolotra Apple Watch (eny, ny Pebble no tiako holazaina). Mikasika ny kalitaon'ny fitaovana, famolavolana, famaranana ary fampisehoana, tsy misy mpifaninana amin'izao fotoana izao afaka manaloka ny Apple Watch, na dia eo amin'ny orinasa paoma aza dia midika izany fa avo ny vidiny. Vitsy ny smartwatches manana vidiny lafo kokoa noho ny Apple Watch, na dia heverintsika fa mitovy tanteraka aza ny maodely rehetra azony atao, ny safidy mety dia ny mifidy ny maodely mora indrindra.
Amin'ny haavon'ny lozisialy dia mbola betsaka ny hatsaraina, ary ny ankamaroan'ireo fanatsarana ireo dia ho hita amin'ny watchOS 2.0. Malahelo ny safidin'ny fanamboarana ho toy ny tonony fampandrenesana izy ary afaka manamboatra ny famantaranandro. Nefa tsy maintsy tadidintsika koa izany miatrika ny taranaka voalohany amin'ny fitaovana vaovao tanteraka isika, Ary misy vidiny izany.
Miandry taranaka faharoa?
Betsaka ny milaza fa tsara kokoa ny miandry ny maodely Apple Watch manaraka. Amin'ny teknolojia dia zavatra azo ampiharina amin'ny vokatra rehetra natomboka izy io: ny iray ao anatin'ny taona dia ho tsara kokoa, ary mety ho mora kokoa aza. Mazava ho azy, araka ny nolazaiko teo aloha, ny "adopter aloha" dia misy vidiny, Izy io koa dia manana izany fahatsapana manokana izany amin'ny fananana famantaranandro manokana amin'ny tananao izay mbola vitsy ny olona. Afaka miandry an'i Apple handefa ny maodely manaraka ve ianao? Ny tsaho milaza fa mety ho tonga amin'ny 2016 izy io, saingy mbola ho hita eo ihany. Amin'ity fotoana ity dia fantatsika raha havaozina isan-taona na roa taona ny Apple Watch, ary izany dia miandry be.
Ny fanatsarana dia ho tonga amin'ny haavon'ny rindrambaiko ihany koa, tsy misy isalasalana. Ny Apple Watch dia mbola afaka manome betsaka ny tenany, ary ny watchOS dia hihatsara betsaka manomboka amin'ny volana Oktobra. Ny mpandrindra dia hanatsara ihany koa ny fampiharana azy ireo, ary hipoitra fitaovana vaovao ho an'ny smartwatch an'i Apple. Amin'ny maha-tompona Apple Watch ahy, mpankafy ny famantaranandro, ary mpahay teknolojia aho, tsy mino aho fa hanome sosokevitra ny fiandrasana ny taranaka ho avy amin'ny olon-kafa. Ny Apple Watch dia manana fotoana mahafinaritra sy ho avy tsy manam-paharoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Izahay dia nanandrana ny Apple Watch, ny smartwatch tsara indrindra amin'izao fotoana izao
joxu dia hoy izy:
miombon-kevitra tanteraka amin'ny zavatra rehetra, tehina io ary na iza na iza mandoa izany dia ananantsika eo am-pelatanantsika ny zaza iray izay tokony hitombo be
Mamaly an'i joxu
TaiG dia manavao ny jailbreak azy amin'ny endriny 2.1.3 manamboatra lesoka
Lisitra baikon'ny Siri miaraka amin'ny HomeKit